Baarlamaanka Dawladda Puntland oo Xukuumadda Gaas ku dhaliilay amniga guud | SAHAN ONLINE
Baarlamaanka Dawladda Puntland oo Xukuumadda Gaas ku dhaliilay amniga guud
GAROOWE – Baarlamaanka Dawladda Puntland oo muddooyinkan ku guda jira kalfadhigoodii 39aad ayaa maanta si weyn uga dooday xaaladda guud ee amniga Puntland.
Kalfadhigii maanta ayaa arrimaha sida weyn looga hadlay waxaa kamid ahaa mushahar la’aanta ciidamada ee sababay gadoodyadii ka dhacay magaalooyinka,weerarkii Af-urur,dilalka qorsheysan iyo qodobo kale.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa shir guddoominayey kalfadhiga,waxaana inta badan xubnihii ka hadlay ay ku dhaliileen Xukuumadda iney ku fashilantay ammaanka.
Xildhibaanada qaar kamid ah ayaa soo jeediyey in la helo cid qaada mas’uuliyada weerarkii Af-urur iyagoona xusay in uu qaato Taliyaha guud ee ciidamada oo ah Madaxweynaha Puntland amba la cadeeyo cid ka hooseysa oo aan weli la daboolin.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa soo hadal qaaday dayaca iyo xuquuq la’aanta haysata ciidamada ,iyagoona sheegay in amni xumada ay sabab u tahay baahida ciidamada oo aan weli la daboolin.
Wiil tuuga hadaad dhashid oo dadka aadan ka qaban wuxu soo qaatana aad wax ka qaadatid hadana aad u ducayso adna tuug baad noqonaysaa anigu waxaan qabaa in golaha Barlamanku inuu yahayn midka ugu darran ee dalka danbiga ugu weyn kaga jira madaama uusan ka qabanayn tuugada sida foosha xun ugu qaadanaysa dhaqaalihii ciidanka la siin lahaa,dhaawac la siin lahaa,agoonta la siin lahaa nin dhintay ban leenahay muu na difaaco”ayuu yiri mid kamid ah Xildhibaanadu.
Baarlamaanka Puntland ayaan looga baran muddooyinkii u dambeeyey iney si dhab ah uga hadlaan xaaladda Puntland iyadoona ajandayaasha kasoo bixi doona kalfadhigan aan la ogayn.